Asidra suksinina miorina amin'ny biolojika, asidra suksinina, asidra amber - landian
Ny orinasa dia nanangana ny hany famokarana biolojika indostrialy ny famokarana asidra succinic line.Ny tetikasa bio-base 1, 4-butadiol industrialization project an'ny orinasa dia voatanisa ho tetik'asa lehibe amin'ny drafitra nasionaly “863,, ary izy no orinasa mitarika ny fotodrafitrasa vaovao weifang bio-base. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa dia manohy manitatra ny làlan-kiheba miorina amin'ny vokatra asidra succinic biolojika, ary mampivelatra ny haitao famokarana succinyl glycol (PBS).
Ny fampiasana ny teknolojia fanamoriana biolojika vaovao, dia maitso izy io, tsy mandoto ary tsy misy poizina. Mpanamboatra lehibe manana vokatra 500.000 taonina isan-taona.
Manana ivon-toerana fikarohana teknolojia momba ny haitao any Weifang City izahay, izay miara-miasa amin'ny Oniversiten'i Tsinghua sy ny Ivotoerana Bioteknologi momba ny Akademia Sinoa an'ny siansa.
Amidy manerana ny firenena ny vokatra ary aondrana any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Kalitaon'ny vokatra tena tsara, nolalovana ny fanamarinana EU REACH ary ny fitsirihana ny US US
Naorina tamin'ny 27 aogositra 2012
Manarona velaran-tany 1 500 hektara mahery
Renivohitra voasoratra anarana 220 tapitrisa
Mpiasa 400 mahery
Fantaro ny vaovao betsaka ...
ny tetik'asa voalohany amin'ny Weifang bio-based material ...
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia miankina amin'ny China Academy of Science Tianjin Industrial Biotechnology Research Institute sy Hunan Changling Petrochemical Technology Development Co., Ltd. ary ny departemanta ch ...
ShandongLandianbiologicalTechnologyCo., Ltd. halal poolicy Shandong Landian Biological Technology Co., Ltd. tanjon'ny fampiharana ny rafitry ny fiantohana Halal (AZA) Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny ip pop ...